Ime mgbatị ahụ na-arụ ọrụ ọ na-arụ ọrụ n'ezie? - Mmega
Isi > Mmega > Omume banded - ịza ajụjụ
Omume banded - ịza ajụjụ
Ime mgbatị ahụ na-arụ ọrụ ọ na-arụ ọrụ n'ezie?
Ndị agha na-eguzogidebụ nnukwurụpụtangwá ọrụ ọ bụghị naanị n'ihi na ha dị oke ọnụ, na-ebugharị ma na-agbanwe agbanwe, mana n'ihi na ha nwere ike inye aka lekọta akwara buru ibu yana obere akwara na-eme ka ahụ sie ike.Mar 19 2021
You maara na ndị mbụ na-eguzogide ndị amata na 1896 mgbe onye Switzerland aha ya bụ Gustav Gossweiler tinyere akwụkwọ ikike maka ikike maka ngwa ọzụzụ na-agbanwe? Iji dochie ngwaọrụ ndị ọzọ dịka 'akụrụngwa egwuregwu', Gustav tọrọ ntọala maka inweta ikike izizi site na nrụpụta ya ruo taa. Ee ee, ndị ahụ na-acha uhie uhie, ihe ndị yiri tube enwetawo ezigbo ewu ewu kemgbe ọtụtụ afọ. Ajụjụ bụ, ha na - ewulite akwara? Ka anyị nweta otu ihe na ụzọ mbụ, ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido, kpam kpam nti, will ga-ahụ na ya pụta na mpe mpe akwa.
Mbido, ị nọ n'udo. Will ga-anabata ọmarịcha ụdị mmega ahụ ọ bụla, gụnyere mmegharị ahụ. Ka anyị wepụ ihe ole na ole ndị ọzọ.
Mpempe akwụkwọ dị mma maka ndị mmadụ na-agwọ ọrịa ahụ, ndozi, na ndị agadi n'ihi na ha na-eme nwayọ na-eme ihe, maka ọtụtụ akụkụ dị mfe ịchịkwa, ma dịkwa mfe ịme n'ụlọ. Ee ee, ndị agha na-eyi egwu dị iche iche nke egwurugwu w nke nwere nguzogide dị iche iche nke nwere ike ịme ọtụtụ mmemme dị iche iche. Akwa! MA! Ugbu a anyi abiala n'ihe ọma.
Nwere ike ọ na-enye gị niile mma gainz? Anyị maara na nyocha na-egosi n'ezie mmụba nke ahụ ike na uru ike ma a bịa n'ihe banyere ndị mbido. Mana mgbe ị na-apụ na ihe ndị egwuregwu na-akpọ 'newbies', ọ dị ezigbo mkpa itolite na ị na-eji ibufe na-aga n'ihu ma na-akpali akwara gị nke ọma. Kedu ihe nke ahụ pụtara maka ndị agha? Nke mbu, kwuo obere ihe banyere physiology nke iku aru.
Ningdọ aka na ntị: sayensị na-agwụ ike n'ihu! Mkpokọta na-adị n'ime sarcomere site na iji teknụzụ filament na-agba ọsọ, bụ nke mmeghachi omume dị n'etiti ihe mmegide actin na myosin na-etolite eriri mmiri. Isi nke eriri myosin na-adabere na eriri filament dị n'akụkụ ma mepụta ihe a na-akpọ 'akwa' wee dọrọ iko ahụ na-aga n'etiti etiti nke sarcomere. Ka ọ na-adọta, mkpirisi akwara ahụ na-adị mkpumkpu.
Mgbe ahụ gbanwee site na akụ ụta na egbe egbe! Dabere na ogologo dị iche iche nke eriri anụ ahụ, ike ị nwere ike iwepụta ugbu a na-agbanwe. Ruo ogologo oge, ọgbọ ike bụ nke kachasị dị ala n'ihi njikọ dị ala n'etiti ihe nkwekọrịta. N'etiti etiti, ike kachasị elu mgbe imirikiti aka metụrụ.
Ma ọzọ adịghị ike na nke kachasị dị mkpụmkpụ ebe ị na-agbagharị kpamkpam n'ihi na ị gafere. Were ọnọdụ a dị egwu dịka ọmụmaatụ. Otu nwoke na-adọta nkume n'ebe ya nọ nke eriri na-ekekọta.
Ka ọ na-atọpụ eriri ahụ, nwoke ọzọ kpebiri isonyere ya n'azụ ma nyere aka, nke na-eme ka traktị nwekwuo. Ka ị na-adọta, ndị mmadụ na-enyere aka ma na-ewepụtakwu ike! N'oge ụfọdụ, ohere gafere na eriri ha wee malite ịlaghachi azụ. Mana ha amaghi na otu ozo na-adota okwute ozo n’azu ha.
Otu abụọ a batara n'ụzọ ibe ha, mee ka ụfọdụ pụọ, ike nrụpụta belatakwara. Ugbu a tinye nke a na nrụpụta ike ike ma ị ga-ahụ eserese dị ka nke a: W siri ike na mbido, dị ike n'etiti, na adịghị ike ọzọ na njedebe. Amaghị m na nke a enweghị isi
Agbanyeghị! Eleghị anya ị na-eche, sị, 'Olee otu mmụọ nke a nwere ihe jikọrọ ya na ndị otu mgbagha?' Ọfọn
Aga m agwa gị!
Mgbe m kọwasịrị ihe nke ahụ pụtara maka ọdịnala ọdịnala gị! Ọfọn, ọ bụrụ na m ga-ebu ibu nke m nwere ike ibuli elu n'etiti ngagharị, ebe m kachasị ike, ọ nwere ike ọ gaghị adị mma n'ihi na enweghị m ike ibuli ya maka ndị na-adịghị ike nke Mpaghara. N’ezie, nke ahụ pụtara na m ga-aga ije n’ụzọ dị mfe karị. Ma ugbu a ibu dị n'etiti dị oke oke ma ọ bụghị m ka m na-enweta ihe mkpali kachasị m mkpa itolite.
Ma abia na biceps curl, adighi m enweta otutu ihe mkpali na njedebe ma. Amaara m, amaara m, ekwuru m na na njedebe nke ịkwaga ị na-esikwu ike, mana na nke a ihe dị na biomechanics nke a maara dị ka ogwe aka oge dị mkpụmkpụ nke pụtara na nguzogide dị ezigbo nso na axis, n'ọnọdụ a nkwonkwo gị ma ọ bụ ikiaka. Obere oge ogwe aka, obere ike dị mkpa iji bugharịa ihe, yabụ na biceps curl anaghị ewepụta ike na njedebe.
Enwere m ike ịgbagwoju gị anya karịa karịa na mbụ, mana ka anyị gaa n'ihu
Dịkwa mma, ugbu a, ka anyị lelee anya na ìgwè ndị na-eguzogide. Mgbochi nke eriri roba dị iche na nke ọdịnala ọdịnala. Moron! Ihe dị iche bụ na ka ị na-adọba ụba nke mmegharị, otu ị na-adọkpụ, otu ahụ ka ọ na-arụ ọrụ ọ bụla.
Nke ahụ bụ, na mbido, esemokwu na nkwụsi ike dịkarịsịrị elu wee bụrụ nke kachasị elu na njedebe ngagharị ahụ. N'ihe banyere bicep curl, Otú ọ dị, nke ahụ dị mma n'ihi na ọ bụ ihe ị chọrọ! Nguzogide na-eto eto n'ihi na ị kachasị ike na mbido, dị ike n'etiti ma dị ike mana ogwe aka dị ala na njedebe! Ma ọ gaghị adabara mmemme niile. Were akụkụ dị n'akụkụ, dịka ọmụmaatụ, ebe ị na-agbasi mbọ ike maka na ogwe aka oge a ka ukwuu.
Na ụfọdụ akwara, ọkachasị akwara p nke siri ike, nwere oke nguzogide, dịka nke a ebe ọ sitere na 50 ruo 125 pound nke ike, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ karịa site na mmalite ruo n'isi! Yabụ nke a bụ nnukwu ọghọm nke ndị otu na-eguzogide, yana eziokwu ahụ bụ na ị ga-eto site na ọkụ ọkụ ọkụ ngwa ngwa wee jiri ụdọ dị ike ga-esiri ike n'ihi na ọ ga-amalite ịdọkpụ gị kama ijide ya Stuck rapaara maka nkeji
Anyị maara na ibu nwere ibu mgbe niile, nke nwere ike ịdị mma, mana ọ pụtakwara na etiti ntụgharị anaghị enwe nguzogide zuru oke iji mepụta mkpali kachasị mma. Anyị makwaara na teepu dị mma n'ihi nrụgide na-aga n'ihu, mana ọ dị oke ala na mbido ma sie ike na njedebe. Ya mere, gịnị ma ị jikọta ha? (Windows ta-da!) Nke ahụ ziri ezi! Dinggbakwunye band gị na ibu gị nwere ike bụrụ ụzọ kachasị mma iji wepụta ọdịiche dị na nrụpụta ike ike; nke ahụ pụtara ọtụtụ ihe nrịbawanye, olu dị ukwuu, na nnukwu uru umm! N'ezie, ọmụmụ ihe ahụ kwadoro ya, ebe a chọtara ya na isiokwu ndị ahụ mere ka nkwughachi ha kachasị elu na ike nke okpukpu abụọ karịa nke band karịa karịa naanị ibu. (Nsonaazụ nwere ike ịdị iche) Ya mere, ụzọ 'amamịghe' iji jiri teepu jiri ya eme ihe bụ site n'iji ya na omume gị ugbu a.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịhọrọ iji eriri n'onwe ha, ịnwere ike iji ha dị ka ihe na-ekpo ọkụ tupu ị banye n'ime ibu. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-ahụta na ọ bara uru ịgbakwunye mgbatị ahụ na mmega mmachi na njedebe nke ụbọchị na-eme ka ọ dị ntakịrị ma mepụta mgbapụta dị arọ. Ma eleghị anya ị nwere ọbụna ụfọdụ ezigbo echiche ị ga-eji na ndị agha gị.
Ma ọ bụrụ na ịmee, kekọrịta ya na nkwupụta! Ka o sina dị, enwere m olileanya na isiokwu a nyere aka karịa mgbagwoju anya, ma ọ bụrụ na ị masịrị ya biko amasị, kesaa, ma denye aha! Dị ka mgbe niile, ekele maka ikiri!
Kedu ihe omume 7 ahụ?
7Kasị dị irèMmega
Na-eje ije. Ọ bụlammega ahụmmemme kwesịrị ịgụnye obimmega ahụ, nke na - eme ka obi sie ike ma na - eme ka calorie dị ọkụ.
Bob na Brad ♪♪ Abụọ Kachasị Ama ♪♪ Physiotherapists ♪♪ Na Ntanetị. (Egwu gwụrụ) - Ndewo ndị bekee, Abụ m Bob Schrupp physiotherapist - Brad Heineck physiotherapist - Ọnụ anyị bụ ndị physiotherapists a ma ama na ịntanetị - N'echiche anyị, n'ezie, Bob - Nke a bụ n'ezie mmelite ederede, emelitere. Ihe omume asaa ị kwesịrị ịme kwa ụbọchị.- Nri.- Kpamkpam.- Ee, anyị ga-ebelata ndị a.
Anyị nwere igwe okwu ka mma. Ọ ga - abụ obere ihe dị iche na mmemme ahụ.- Tupu anyị amalite nke ọma, ngwa ngwa.- Oh ee. - Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na ọwa anyị, were nke abụọ ịdenye aha, anyị nwere akụkọ gbasara ahụike, enweghị ihe mgbu ma anyị bulite ha kwa ụbọchị.
Gaa na BobandBrad.com n'ihi na anyị na-enyefe ihe mgbe niile na-ewepụta ihe Fit Fit Index vibration foam. N'ezie ọfụfụ ụfụfụ na-akwụ ụgwọ maka ọnụahịa ahụ.- Right.- Nke a bụ n'ezie ọrịre.- Ọ nwekwara usoro ọmarịcha ịma jijiji, anyị hụrụ ya n'anya.- Ọ ga-abịarukwa na Facebook agbado elu nke ibe ahụ.
Ma mgbe isi m metụrụ aka, ana m ama na m nọ n’ọnọdụ dị mma. Anaghị m eme nke ahụ, m ga-alaghachi tinye ntụtụ m n'olu m na onye ọ bụla ga-eme ise na iri n'ime ndị a n'etiti. Nke a bụ nke ị nwere ike ịme oge ọ bụla. - Mgbe ị nwere ọnọdụ dị njọ na ịlaghachi otu a, karịa ịlaghachi azụ, nke ahụ na-egosi na ị nwere ụzọ ịga. - Ziri ezi.
Ya mere, ọzọ na onye pụrụ mere taa enweghị nsogbu ọ bụla. Kwesighi ime iri n'ime ndị a ma ọ bụrụ na ị na-eme ha kwa awa ma ọ bụ karịa, mee naanị abụọ ma ọ bụ atọ na ya niile na-agbakwụnye nnukwu ncheta. Nke ọzọ dị mma ịnwe akwa nhicha akwa maka ya ma ọ bụ ịnwere ike iji aka gị.- Ee.- Youchọrọ igosi ha nke ahụ.- M ga-eme aka ahụ.- Ọ dị mma ma ị ga-enweta mpịakọta ma ọ bụ jiri aka gị n'olu , hapụ m nke m ebe a Wepụ iko.- Ya mere, ọ fọrọ nke nta ka m dị ka akụkụ ala ma ọ bụ ọbụna ọnyà elu.- Yup.- can nwere ike imetụ onwe gị aka.- Ihe kachasị mma ime bụ iji oche oche mee ya ka ị nwee ike izu ike azụ gị.
Ma Bob agaghị. Ọ ga egosiputa gị n’enweghị, mana oche dị obere mma. Anyị na-ebido iji obere agba agba wee laghachi azụ.
Ihe omume ndị a niile ekwesịghị ịbụ ihe mgbu, ma ọ bụrụ na ha mepụta agba, nke ahụ nwere ike bụrụ nsogbu na ịgaghị eme ha. Ya mere buru n'uche onye ọ bụla. Ọ bụrụ na nke ọ bụla merụrụ ahụ, mafere nke a. - Brad na naanị m maara ya site n'oge gara aga site na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị ọrịa dasqui Ọtụtụ mgbe, nke a bụ ntụziaka ndị mmadụ uko.
Ma mgbe ị na-arụ ọrụ na ntụziaka ahụ ọ na - enyere aka ịmegharị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntụziaka niile - Kachasị - Ya mere nke ahụ bụ nke ị na - achọkarị ide, ị nọ n'ihu ụbọchị ma ọ bụ gbadaa ala, ịchọrọ ịnọ na nke ahụ jee na uzo ozo. - Na ugboro ise ruo iri na ya. Enwere ike ime nke a n'ehihie.
Ma eleghị anya, ọ bụghị mgbe ọ bụla a na-adọrọ agba. Anyị na-akpọ nke a na-esote postural scapular retraction. - Aga m eme ya na W.
Mee W ebea ma piaji ubu ubu m. Ọ masịrị m n'ihi na ọ na-agbatị ma na-ewusi mọzụlụ obi n'otu oge. - Ziri ezi. - Ugbu a osisi booyah ahụ na-arụ ọrụ nke ọma ọbụlagodi n'ihi na ị na-agbatị n'ezie.
Ndị a, anyị nwere mmemme ndị ọzọ ga - adị gị mma - Ee, mana ndị a dị oke mma maka igbochi mgbu azụ, yana maka ọtụtụ mmadụ ha bụ m dịkwa oke mma maka ịgwọ mgbu azụ - N'ezie, ee - Ya mere ana m eme ya Nke a kwa ụtụtụ.- Ee.- M na-eme nke ọma maka 20 iji kwuo eziokwu.- Na ị nwere ezigbo ngagharị ọ bụla.
You bụ? Afọ 60? - Enwere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 60. - Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ.- M kụrụ aka n'ọnụ ụzọ na June.- Enweghị ọtụtụ ndị nọ na 60 bụ ndị na-agbanwe agbanwe na azụ.- Nke ahụ bụ eziokwu.- Ihe akaebe na pudding.- Mee Ọ meela ruo ọtụtụ afọ.
Abata m n'ọnọdụ a maka ihe kpatara Brad. - Eeh. - Ee e, anyị ga-eme nwamba na kamel ugbu a.
N'ihi ya, m arch elu. Agbada m. Up.
Ab. Brad na-ebipụ anyị enweghị ike ịnụ ya na nke a bụ oge m iji na-enwu ebe a - oh yeah M pịa bọtịnụ nkwụsịtụ. Echere m na m kụrụ ihe ebe ahụ. - Brad azụ azụ ahịa. - Ah, nke ahụ ziri ezi na ndị a dị mma ime ihe ruru iri n’ime ha. - Omume ọma na - arụ ọrụ na ngagharị nke ngịga ahụ yana yana ngagharị nke mkpụrụ osisi lumbar. - Cheta iku ume na ihe ndia niile.
Anyị kwesịrị ịkpọtụrụ nke a n'otu ntabi anya, mana nke ahụ bụ ihe ebe nchekwa ahụ dị, iku ume na izu ike. Na-esote, anyị ga-aga ụkwụ ụdọ. Aga m egosi ezigbo ụzọ iji mee ya.
Bob ga-eme ya dina. Ha abụọ bụ ụzọ dị mma iji gbatịa. Ihe ọ bụla ị na-eme, mee ka ikpere gị kwụ ọtọ na azụ gị kwụ ọtọ.
Ya mere aga m egosi gị na ị nwere ike iji mkpara ma ọ bụ osisi booyah nke na-eme m ka m mee ka azụ m kwụ ọtọ. Enwee m ezi apata ụkwụ. Ọ bụrụ n’ịme ya otu a, ị chọghị ya. - wantchọghị ịgbagharị.- keep na-edebe ya n’ụzọ ahụ.
Gaa n'ihu, Bob, m ga - agbatị - Ọ dị mfe, ị ruru n'okpuru ikpere gị. N'ebe a n'apata ụkwụ na ị ga-agbatị ya. Dọọ ụkwụ gị n'akụkụ m dịka m nwere ike.
Apụghị ikweta - Ararụ m ụra nke ukwuu - Ma eriri eriri ikiri ụkwụ gbatịrị agbatị. E nwere ọtụtụ ụzọ ị nwere ike isi mee nke a. Ọ bụrụ na ị nwere bọọdụ mkpọda, echere m na ọ bụ ụzọ kachasị mma iji mee ya.
Otu nwanyị gara maka runso, ọ dọba ụgbọala ya na ya guzo n'azụ ụgbọ ala n'okporo ụzọ a. - Ndi ụzọ a? - Ee, nwoke ọzọ bịara ma nyere ya aka nwaa ịkwanye ụgbọ ala ahụ. Achọrọ enyemaka.- Ọ chere na ọ bụ ụgbọ ala mebiri emebi.
Ndị agha na-eguzogide ọgwụ na-eme ka ụsụ gị buru ibu?
Na-eme ìgwè ndị aghaMee Akwara? Eeh, mana enwere nwudo. 'Booty gbalagaomume na-enyere aka iche ma zube, ma si otú a rụọ ọrụ,iheobere akwara na-atọ ọchị: glute minimus and glute medius, 'ka o kwuru. Nke a bụ karịsịaiheikpe ma ọ bụrụị na-karia onye mbido nke na-ejitụbeghị ha.Ọgọst 20 2019
Bootlọ nkwari akụ a nke ụlọ a bụ ebumnuche 10 gị, wuo, ụdọ, mgbapụta, na mgbatị ahụ. Kwenyere na ihe niile ọ ga - ewe bụ nkeji 10. Ọ bụrụ na inwere ya, jide otu ndị na - eguzogide, ma ọ bụrụ na echegbula.
Ka ga-eche ihe ọkụ dị egwu. Mee ka m mara ka ị si kwuo n’okpuru ebe a. Achọrọ m ka ị mee nke a ụbọchị iri na anọ ma ị ga - enweta nsonaazụ dị egwu dịka ụmụ nwanyị ndị a ebe a.
Nsonaazụ ọzụzụ ụlọ dị ịtụnanya, kpado m na Instagram ma ọ bụ TikTok maka ohere ị ga-egosipụta ebe a. Achọrọ m iwepụta oge iji kwuo na m bụ ụmụ agbọghọ. Are na-emebi ya n'ụzọ anụ ahụ na n'uche.
Ama m na ọ bụ gị. M na-eche oké na m na ya, otú mpako nke gị. Mgbe mgbatị ụmụ agbọghọ dị ka ị maara m na-eji Nutrition kachasị mma, pink lemonade pump pump pụọ.
Mgbapụta, mgbapụta, mgbapụta, mgbapụta. N’ezie, ọ bụrụ n’inweghị otu egwu, echegbula onwe gị, mana iji ụdọ ndu ahụ ọkụ anaghị adị adị. Chọta nke ahụ kụrụ ya. (Obi ụtọ na-atọ ụtọ) 10 sekọnd.
Ọfọn, buru ibu laghachi n'ikiri ụkwụ. Mepee obi, dọpụta isi n'ime. Atọ, abụọ, otu laa ugbu a. (Egwu na-ada ụda) Mee ka ikpere gbasaa.
Ibu ibu gị ikiri ụkwụ, obi na-emeghe, na-eche na kwaa. (Joy music) Ọmarịcha ọrụ. Na azụ akpa ume.
Were ụkwụ azụ. Ọ bụ otu, abụọ. (Egwu obi ụtọ) (mkpu mkpu) Ọ dị mma.
Kwụ ọtọ n'akụkụ nke ọzọ. Na-eche na iti ugbu a. Anyị na-aga na akwa mmiri mbụ anyị.
Achọrọ m inwe mmetụta ọnụ, ikpere iche, mgbapụta n'ihu. Up, gbagoo. (Obi ụtọ na-atọ ụtọ) pịgharịa ihe nkwata ahụ ọzọ.
Ọdịda na-abịa. (Mkpu mkpu) Na anọ, na atọ. Na na na, ụkwụ ubu obosara iche.
Mepee, mechie, ala, elu. (Obi ụtọ na-ada ụda) (Oti mkpu) Na-afanye anụ oriri 100%. Jide ma afanyekwa.
Bịa na ụmụ okorobịa, nwee mmetụta nke ọkụ ahụ, piakota, pịgharịa Ya. (Obi ụtọ dị ụtọ) Obere dị elu. Bịa, afanyekwa gị n'ọnụ.
Core uko. (Obi ụtọ na-ada ụda) (Mkpu mkpu) Ọ dị mma, na-agbanye ọsọ ọsọ ugbu a. Ka a pụọ.
Ọpụpụ, pụọ, pụta, pịkọta apata ụkwụ gị ọnụ, ọ dị mma? Ngwanu, gbanye anụ ahụ na-eri anụ. (Egwu obi ụtọ) Mgbatị mmiri ikpeazụ. Achọrọ m ka ị gaa ikpere ụkwụ aka nri gị na ikpere aka ekpe gị.
Down, pịa. (Egwu obi ụtọ) (mkpu mkpu) Ọ dị mma. Gbanwee ụkwụ, ka anyị gawa.
Ọ bụ ala, afanyekwa. Gbanyụọ ihe nkwata, bia, isi ike. (egwu obi ụtọ) (mkpu ụda) Ọ dị mma.
Ugbu a tụgharịa n'akụkụ anyị. Achọrọ m gị na aka gị. Ga-eme ka elu ụkwụ dị elu pụọ na ala.
Mgbapụta, ala. Bulie, gbaputa mmiri, ala. (Egwu di egwu) Kwado ya ma kpoo ya, ka anyi gawa.
Mgbapụta, mgbapụta, mgbapụta. Ezigbo ọrụ. Bịa, jiri nke ahụ na ịkwakọrọ n'èzí.
nyocha pụrụ iche pụrụ iche
Jiri ike ahụ mee ihe. Push band a mgbe ị nwere ha. Na nke ka elu. (Obi ụtọ na-ada ụda) (Oti mkpu) Na-agbada.
A ga m eme ka ị bute ikpere n’ihu. Ọ bụrụ na ị kwụghachi ya azụ, ị ga-ehulata ụkwụ gị, ọ dị mma? Ya mere gaa n'ihu, pịa. (egwu obi ụtọ) Jide ya.
Jide ma afanye aka gị. Mee ka ọ dị ike. Ọmarịcha ọrụ, ụmụ nwoke.
Bịa, jide, jide onwe gị ezigbo ike. Na ise, n’ime atọ, na abụọ, na otu, buo, ka anyị gawa. (Obi ụtọ na-ada ụda) (mkpu ụda) Ọfọn, anyị ga-edozi gị n'akụkụ ọzọ.
Laghachi na shei ahụ. Up, mgbapụta, ala, ka anyị gawa. (egwu obi ụtọ) Ọzọ.
Ezigbo ọrụ. Ugbu a, jide, na mgbapụta, ka anyị gaa, mgbapụta, mgbapụta, mgbapụta. (Nwanyị na-enwe a )ụ) Nwee mmasi ọkụ. (Obi ụtọ na-atọ ụtọ) Abata n'ebe ahụ.
Naanị mmega ahụ ole na ole. Got nwetala ya n’akpa gị, bia, sekọnd iri. Nweta ikiri ụkwụ. (egwu obi ụtọ) (mkpu ụda) Ọ dị mma.
Ugbu a, jide, gbagọọ ụkwụ gị. Jide nke ọma mara mma, ike butt. Tụgharịa na akwara ndị ahụ, isi siri ike.
Jide, jide, jide. Core, ise, abụọ, otu, gbapụta mgbapụta ugbu a. Anyị agaba. (Egwu di egwu) Odi nma, anyi emechiela.
Na anọ. Nwa inyinya ibu. Rọọ ụkwụ gị.
Up, mgbapụta, nwayọọ nwayọọ. Up, mgbapụta, nwayọọ nwayọọ. Ọfọn, ugbu a jide ya.
Nfuli ngwa ngwa, ka anyị gawa. Up, elu, inupụ isi gị. Nwanyị na-aersụrị) Nnennen n'akụkụ nke ọzọ.
Up, pumping, nwayọ, ka anyị pụọ. Up, mgbapụta, ngwa ngwa. (egwu obi ụtọ) Ọ dị mma.
Ugbu a ngwa ngwa, mgbapụta, mgbapụta, afanyekwa anụ oriri. Bịanụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ahụ.
Ise, anọ, atọ, abụọ, otu. I mechakwara. I tiwara ya familia! Biko echefula inye mkpịsị aka gị.
Ọzọkwa pịa Idenye aha ma mee ka m mara otú obi dị gị na nkwupụta ndị dị n'okpuru. Gụ ihe ị kwuru n’ụzọ dị ịtụnanya n’ihi na m na-ele anya na eri ndị ahụ na-etolite ma na-agbarịta ibe ha ume ma na-akpali ibe anyị, anyị bụ ezigbo ezinụlọ dị egwu na ntanetị. Achọrọ m ịsị na m ji gị anya isi.
Ahụrụ m gị n'anya daalụ maka ị bụ akụkụ nke njem a dị ịtụnanya. Hit kụrụ ya. A hụrụ m gị n'anya.
Lee gị echi maka ọzụzụ ọzụzụ ụlọ ọzọ. (egwu na-ada ụda)
Bandtù ndị agha dị mma karịa ibu?
Ọmụmụ ihe ahụ chọpụtara na iguzogideìgwègosiputa ihe yiri yaigwena mmega ahụ nke elu na nke ala. Nguzogideìgwèbụchaghịmma karịa igwe, ma ha na-enye uru ndị yiri ya maka ike ọzụzụ kpọmkwem.Ọgọst 8 2019
Gịnị ka squat na band nwere?
Squatna-eguzogideìgwèna-eleba anya n'ọgba, quadriceps (apata ụkwụ), na akwara addu hip. Mkpụrụ obi nke abụọ nke mmega ahụ gụnyere azụ na isi, nke ahụ gị chọrọ maka nhazi na nkwụsi ike (3, 4, 5, 6).24 nke 2020bọchị 2020
Ndị na-eguzogide ọgwụ na-esure abụba?
Nguzogideọzụzụ na-enyere aka karịaabụbaọnwụ site na ịba ụba ma-ọkụmgbe mmega ahụ, na site na ịba ụba ahụ ike, si otú ahụ na-abawanye ọnụọgụ calorie anyịọkụna-ezu ike.Sep 29 2020
Enwere m ike ịdọrọ ndị otu mgbochi?
Mana ọ ga-ekwe omume iwulite akwarandị na-eguzogide ndị agha. Ọ bụghị naanị ndị aìgwèebugharị ma dị mfe ịrụ ọrụ, ha na-arụkwa ọrụ nke ọma ma a bịa n'ịgba ume na inweta ahụ ike.Ndị agha na-eguzogidewuo akwara n’otu uzo dika igwe n’efumee.
Kedu ihe kpatara skwọs ejiri jụọ mma?
Ndị agha na-eguzogide zuru oke makasquatsn'ihi na ha na-enyere aka ịchịkwasquatngagharị site na mmalite ruo n'isi. Ha na-enye nguzogide mgbe ị gbadara n'ime asquat, nke a na-akpọ mmegharị eccentric, yana nguzogide mgbe ị biliri ọtọ, nke a na-akpọ mgbatị uche (1, 2).24 nke 2020bọchị 2020
Ndị agha mgbochi ma ọ bụ ibu dị mma?
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-achọ inweta ahụ siri ike ma gbanwee ahụ gị nke ọma,igwega-enweta gịmmaNsonaazụ (na ngwa ngwa). Ọ bụrụ na i bidolarị ọzụzụ ike site naigwen'agbanyeghị,ndị na-eguzogide ndị aghanwere ike bụrụ ihe dị mma maka ijigide akwara.
Kedu ihe mgbochi kachasị mma ma ọ bụ igwe efu?
Mmetụta na mọzụlụ:iguzogidearọ na-anọ otu mgbe ụdị ọrụ zuru ezu. Jiri ya maka: ọ bụrụ na iwulite ike mọzụlụ na ike gị bụ ebum n’uche gị,free igwebụ kpam kpam.Ndị agha na-eguzogideagaghị enwe ike ịma gị aka n'ụzọ dị oke, ịdị arọ ga-agbanwe.22bọchị 22 2019